"Izy (Jesosy) no ananantsika fanavotana amin’ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny harenan’ny fahasoavany." Efesiana 1:7
Toerana mahafinaritra ny helodranon’i Rio de Janeiro, any Brésil. Mandondona eo ambonin’io tanàna misy mponina enina tapitrisa mahery io ilay sary vongana goavana antsoina hoe “Kristy Mpanavotra”. Valo amby telopolo metatra ny haavony, ary nanjary fanevan’ny tanàna izy.
Toy ireny hazofijaliana atsangana eny an-tsampanan-dalana eny ambanivohitra ireny, dia efa anisan’ny tanàna io sary vongana io. Ary amin’ireo mponina ao an-tanàna izay tsy taitra akory manopy maso azy, na ireo olona ana hetsiny isan-taona mitsidika ilay tsangambato, iza moa no mba mahafantatra ny antony nampikambanana ny teny hoe “Mpanavotra” amin’ny anaran’i Kristy?
Ny teny hoe “mpanavotra” dia midika hoe “ilay nividy”; ary hazavain’ny Baiboly amintsika ny antony iantsoana an’i Kristy toy izany. Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia naka ny fomba maha olombelona antsika. Nambaran’Andriamanitra mialoha fa ho avy io Zanany io, nofidiny Izy, nirahiny mba hikarakara ny olombelona sy hitahy azy ireo. Niaina tety; an-tany Izy, ary tsy mba nanota. Nanao ny soa Izy, niara-nizaka ny fahoriana tamin’ny olombelona. Inona no niafaran’ilay fiainany feno fahafoizan-tena? Ny hazofijaliana.
Nampahatsiaro ny apostoly Petera, taorianan’ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, hoe: “Iny Jesosy nohomboanareo tamin’ny hazofijaliana iny dia efa nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy” (Asan’ny Apostoly 2:36). Niaretan’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana ny famaizan’Andriamanitra ny fahotantsika. Nandoa ny avotra ho antsika Izy, ary nanonona ilay teny manana lanja tsy hita lany hoe: “Vita” (Jaona 19:30). Izay mino ny lanjan’io avotra nefain’i Kristy io dia voavidy, ary afaka. Ho anao, tsy misy heviny ve, sa hadalana, ny hafatra momba an’i Kristy Mpanavotra sy ny hazofijaliany? Io hafatra io anefa dia mbola mitoetra ho “herin’Andriamanitra”, manazava sy manafaka izay mandray azy (1 Korintiana 1:18).